बच्चा जन्माउने वित्तिकै आमाले किन शिशुलाई बाँसघारीमा फालीन् ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
बच्चा जन्माउने वित्तिकै आमाले किन शिशुलाई बाँसघारीमा फालीन् ?
काठमाडाैँ । पाेखरामा एक आमाले बच्चा जन्मने बितिकै बच्चालाई बाँसघारीमा फालेर हिँडेकी थिइन् । सोमबार दिउँसो पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १६ बाटुलेचौर नजिकै उक्त घटना घटेकाे हाे । बाँसघारीमा नवजात शिशु फेला परेपछि स्थानीय जम्मा भएर प्रहरीलाई खबर गरे । प्रहरीले घटना स्थलमा पुगेर सोधपुछ गरेर शिशुकाे आमा पत्ता लगायाे । बच्चा फाल्ने महिला उदयपुर घर भई हाल पोखरा बस्दै आएकी रञ्जु भनिने सीमा मगर रहेकाे प्रहरीले बताएकाे छ । प्रहरीले सोधपुछ गर्न थालेपछि मगरले बच्चा फालेको स्वीकार गरिन् ।
बैवाहिक सम्बन्धपछि गर्भवती भएकी सीमालाई केहि समय अघि श्रीमानले छाडेपछि एक्लै पोखरामा मजदुरी गर्दै आएकी थिईन् । श्रीमानले छाडेका कारण आर्थिक अवस्था कमजोर भएर पालनपोषण गरेर हुर्काउने आँट नभएकाले आफुले बच्चा फाल्न बाध्य भएकाे मगरले प्रहरीलाई बताएकि छिन् ।
बच्चालाई सेतो कपडामा बेरेर अरु कसैले देख्ने गरी आफु बस्दै आएको घर नजिकैको बाँसघारिमा लगेर छाडेकाे मगरले बताइन् ताकी अरूले बच्चा देखेर लगेर पालाेस् । प्रहरीका अनुसार हाल शिशुको फेला परेको शिशु हाल गण्डकी अस्पतालमा उपचार भईरहेको छ भने सीमा प्रहरीको नियन्त्रणमा छिन् ।
विश्वकप:अहिलेसम्म क-कसले पाए गोल्डेन बुट र गोल्डेन बल ?
एजेन्सी । फिफा विश्वकप २०१८ सुरु हुन अब दुई साता मात्र बाँकी छ। विश्वभरका फुटबल पारखीहरुको नजर अहिले रसिया […]
नेपालकी छोरी तेरियालाई सिड्निवासिको भब्य स्वागत, अध्ययनको लागि कोषको उपहार(भिडियो सहित )
सिड्नी/ डान्स इण्डिया डान्स मास्टर उपाधि २०१४ विजेता तेरिया फौजा मगरलाई सिड्निका नेपालीहरूले भब्य स्वागत […]
बेनी-चुत्रेनी खण्डमा वैकल्पिक सडककाे प्रयोग, दिउँसो बन्द
म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी–दरवाङ सडक स्तरोन्नतिका लागि बेनीदेखि चुत्रेनी खण्डमा वैकल्पिक सडक प्रयोगमा […]
प्रधानमन्त्रीको एमाले सांसदहरुलाई यस्तो निर्देशन
काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा कांग्रेसले प्रश्न उठाउन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा […]
सिरहाका तीन किसानलाई राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार
कात्तिक १८ । सिरहाका तीनजना अगुवा किसानलाई राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारबाट पुरस्कृत भएका छन […]